လက်ကားဖြီးဆီလီကွန် emulsion စက်ရုံနှင့်စျေးနှုန်းများ | ဟွန်း
အသုံးပြုမှု - Fluffing Silicone emulsion PR160 သည်အထူးအော်ဂဲနစ် silicone emulsion ဖြစ်ပြီးပေါင်းစပ်စနစ်၏အဓိကကုန်ကြမ်းဖြစ်သည်။ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းnapped ထည်များအတွက်အေးဂျင့်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း, Shearing & Emerizing ချည်, T / C, polyester, နိုင်လွန်နှင့်၎င်း၏ရောနှောပိတ်ထည်။ ထည်ထည်သို့ကတ္တီပါပျော့ပျောင်းချောမွေ့နှင့် voluminous လက်ကိုင်ပေး။ ၎င်းသည်ထည်အခြေအနေအရအလွှာ emulsion နှင့်ကွဲပြားသောအချိုးအစားဖြင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
napped ထည်ကို napping လုပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ပျော့ပျောင်း။ ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းမှုကိုပြုလုပ်ရန်အ ၀ တ်အထည်များ၏မျက်နှာပြင်ကိုစုတ်တံဖြင့်ချည်နှောင်ထားသည်။ အကျွမ်းတဝင်နမူနာများမှာ flannel, moleskin နှင့် polar သိုးမွေးတို့ဖြစ်သည်။
သိုးမွှေးကို Polyester ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအထူတိုးစေပြီးလေအိတ်ကပ်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သိုးမွေးသည် Merino သိုးမွှေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုနွေးထွေးမှုနှင့်အလေးချိန်အချိုးအစားရှိသော်လည်းငန်းဆင်းသို့မဟုတ်ဒြပ်ဝတ္ထုများထက်နိမ့်သည်။
napping သည်ကွေးညွှတ်။ ချည်ထိုးထားသောနှစ်မျိုးလုံးအပါအ ၀ င် woollens၊ cottons, spun silks နှင့် spun rayons များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းဖြစ်စဉ်တွင်ထည်ကိုအ ၀ တ်အထည်များဖြင့်အအေးခံထားသောဆလင်ဒါများမှ ဖြတ်၍ ပါးလွှာပြီးအမျှင်များသောအားဖြင့်ယက်ခြင်းမှသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မျက်နှာပြင်သို့ရွေ့သွားခြင်းဖြင့်အိပ်ငိုက်သည်။ နွေးထွေးမှုကိုတိုးစေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည် ၀ ံကောင်များနှင့်အဆိုးဆုံးရောဂါများနှင့်စောင်များကိုမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
အပျော့စား - non-ionic
PH တန်ဖိုး - ၆ ~ ၈
ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် applications များ:
1. ကောင်းမွန်သောပျော့ပျောင်းသောချောမွေ့သောခံစားမှုအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ အထည်ကိုလွယ်ကူစွာပျော့ပျောင်းစေသည်；
ကွန်တိန်နာအတွင်းရှိအလွှာကိုရေပူနှင့်ရောပြီးအရည်ပျော်ပါစေ။ ထို့နောက် Fluffing ထည့်ပါ
ဆီလီကွန် emulsion အချိုးအစားအတွက်, အညီအမျှနှိုးဆော်နှင့် filtering ကိုပြီးနောက်အသုံးပြုပါ
၁။ Polyester loop အထည် (Coral pile နှင့် polar သိုးမွေး)
အားနည်းသော cationic အလွှာ ၂၅ ကီလိုဂရမ်၊ PR160 ကို ၅၀ ကီလိုဂရမ်နှင့်ပေါင်းလျှင် ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်၊ သောက်သုံးသော: 40-50 ဂရမ် / ဌ
အားနည်းနေတဲ့ cationic အလွှာ ၄၀ ကီလို၊ PR160 ကို ၇၀ ကီလိုဂရမ်ထည့်ပြီး ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်၊ သောက်သုံးသော: 40-50 ဂရမ် / ဌ
3. T / C ယက်ထည် (၈၀/၂၀ သို့မဟုတ် ၆၅/၃၅)
အားနည်းသော cationic အလွှာ ၃၀ ကီလို၊ PR160 ကို ၇၀ ကီလိုဂရမ်ထည့်ပြီး ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်၊ သောက်သုံးသော: 40-50 ဂရမ် / ဌ
4. ရက်ကန်းထည် DTY (ချည်မျှင်ကြိုးချည်ဆွဲ)
အားနည်းသော cationic အလွှာ ၂၅ ကီလိုဂရမ်၊ PR160 ကို ၅၀ ကီလိုဂရမ်ထည့်ပါ၊ ဆီလီကွန်ပိတ်ဆို့မှု ၁၀-၂၀ ကီလိုဂရမ်ထည့်ပါ။
1000kg မှဒြပ်ပေါင်းများ, သောက်သုံးသော: 40-50 ဂရမ် / l;
အရောင်ချွတ်အရောင်ချွတ်ထည်များအတွက်, အားနည်းအလွှာ non-ionic အလွှာနှင့်အစားထိုးပါ
မှတ်ချက်။ ။ အထက်ပါအချက်အလက်များသည်ရည်ညွှန်းအတွက်သာဖြစ်ပြီး၊ အမှန်တကယ်လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်မူတည်သည်
ထုပ်ပိုးခြင်း - ၂၀၀ ကီလိုဂရမ်စည် (သို့) ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ် IBC ဖြင့်ပေးသည်
စံသတ်မှတ်ထားသောသက်တမ်းသည်ထုတ်လုပ်မှုနေ့မှ ၁၂ လဖြစ်ပြီးမူလဖွင့်ထားခြင်းမရှိသေးပါ
2 မှာကွန်တိန်နာ℃~ ၃၀℃။ ကျေးဇူးပြု၍ သိုလှောင်ရန်ထောက်ခံချက်နှင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့ကိုရည်ညွန်းပါ
ရှေ့သို့ D4 D5 D6 အခမဲ့ Siloxanes
ပြီးအောင်အေးဂျင့် Shearing & Emerizing; ဆီလီကွန် emulison fluffing
polyester ဆေးဆိုးများအတွက် Dispersing အေးဂျင့်
အက်ဆစ်နှင့် Pre-metallized ဆိုးဆေးများအတွက် leveling အေးဂျင့်